Ihe ngwọta ịfụfụ - Delta Engineering - Meziwanye arụmọrụ gị!
Ngwọta maka ịfụfụ ọkụ: igwe maka mmepụta na nkwakọ ngwaahịa karama plastik na arịa: palletizers, leak testers, ...
Ngwọta maka ịfụ ịfụ
Anyị nkwakọ ngwọta maka igbu ịkpụzi ụlọ ọrụ na-agụnye a dịgasị iche iche nke baggers, tree-akpakpo, palletizers & depalletizers, ikpe-atụkọ, shrinking tunnels, tree n'ụlọ nkwakọba ihe, dahari mkpọ mkpọ ngwọta…
ỤLỌ NA -EZI
Rite uru na ahụmịhe anyị maka njikwa akara nke karama plastik ma ọ bụ ihe nkedo gị: nyocha ule, nyocha dị arọ, tụlee akụrụngwa ule ...
Ndị na-ebugharị kalama (eriri dị larịị, yinye, njigide akụkụ), njikwa pallet, igwe mbuli elu, igwe na-agbanwe ọkụ…
Gaa na ihe ngosi okporo ụzọ anyị na 2022!
Ị chọrọ ozi ndị ọzọ na ihe ngosi okporo ụzọ anyị ma ọ bụ ịchọrọ ịdebanye aha? Pịa ebe a iji zitere anyị email!
Kedụ ka anyị ga - esi nyere gị aka?
Nyocha ngwaahịa & ọrụ
Weebụsaịtị & amụma nzuzo
Ihe mgbako onu ahia akpa
Ngwa mbukota ihe
Na Delta Engineering, anyị nwere ihe karịrị afọ 25 nke ahụmịhe ngwọta maka igbu ịkpụzi.
Kemgbe ntọala anyị na 1992, anyị na-elekwasị anya na mkpa nke ndị ahịa anyị. Karịsịa, anyị na-etolite a nso nke azịza maka nsogbu ndị ụlọ ọrụ na mpaghara ahụ na-enweta.
Iji maa atụ, usoro ngwaahịa anyị gụnyere palletizers na depalletizers, trailers, ndị na-achịkwa njikwa dị ka ndị na-agba ịnyịnya ma ọ bụ ndị na-enyocha ibu, ndị na-ebu akpa, ọwa mmiri, ndị na-akwọ ụgbọ mmiri, ngwugwu ngwugwu ngwugwu, silos, ụlọ nkwakọba ihe nnwale, usoro mwepụ, igwe na-ebugharị. , tebụl jụrụ oyi na ebe nchekwa, ibutu tebụl, ndị na-ebu karama, ndị na-agbanwe ụzọ, ndị na-ebugharị karama, ndị na-achịkwa akara, na-arụ ọrụ ndị na-etinye ihe, mkpuchi plasma…
Na mpempe, dị iche iche igwe na ihe ngwọta maka mmepụta na nkwakọ ngwaahịa nke karama plastik na igbe!
Ọzọkwa, ozi anyị bụ:
Mee ka arụmọrụ gị dịkwuo mma!
Iji mezuo nke a, anyị na-emepe ma rụpụta ihe ngwọta nke na-ebuli usoro mmepụta nke ndị ahịa anyị, site na mbenata ọrụ aka, ngwugwu nkwakọ ngwaahịa na ụgwọ njem.
N'ihi usoro a, Delta Engineering ghọrọ otu n'ime ndị na - eweta ngwa ọrụ akpaaka maka igbu ịkpụzi ụlọ ọrụ.
Ihe ịga nke ọma anyị dabeere n'ọtụtụ dịgasị iche iche nke ịkpụzi nke ọma.
Na mgbakwunye, ọ nwekwara ike kọwara site anyị eru pesonel, iguzosi ike n'ihe ha na ya mere ìgwè nke ahụmahụ, nke hugely uru ndị ahịa anyị.
Ihe ọzọkwa bụ ọhụrụ. Anyị innovations na-egosi na ụkpụrụ dị elu anyị setịpụrụ onwe anyị dị ka a ahịa na ọhụrụ onye ndú na igbu ịkpụzi ala ụlọ ọrụ.
Na, ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, anyị na-ekele anyị uto ka a mgbe nile ụgbọala ka mma anyị ọrụ ọbụna n'ihu: anyị na-agbasi mbọ ike nrụnye dị mma na mgbe-ahịa nkwado.
N’ihi nke a, anyị nwere ọnọdụ dị iche iche ịchọrọ ihe ndị ahịa anyị chọrọ gburugburu ụwa.